'Masriin Abbayyaatti kophaa fayyadamuuf fedhuun marii eegalametti gufuu ta'aa jirti'- Ministeera Dhimma Alaa - BBC News Afaan Oromoo
'Masriin Abbayyaatti kophaa fayyadamuuf fedhuun marii eegalametti gufuu ta'aa jirti'- Ministeera Dhimma Alaa
16 Waxabajjii 2020
Masiriin ammas laga Abbaayitti ishee qofti akka fayyadamtu barbaaduun marii amma eegalletti gufuu ta'aa jirti, jedhan Ministirri Dhimma Alaa Itoophiyaa Obbo Gadduu Andaargaachaw.
Ammas Masirii irraa amantaa akka hin qabne kan dubbatan Obbo Gadduun, mariin Itoophiyaa, Masiriifi Sudan dhimma Hidha Haaromsarratti taasisan guyyoota shan qabate hanga ammaatti maalirra ga'e kan jedhurratti ibsa kennniiru.
Ibsa isaanii kanaanis ammas Masiriin qeeqaniiru.
Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti Masiriin akkuma kanaan dura barte adeemsa lama hordofaa jirti.
''Masiriin ejjennoo lama qabaachuushee ammas ittuma fufteetti. Yaadi ishee tokko marii kana keessa jira, kan biraan ammoo qaama nageenyaa waliin mari'atti. Kun nu shakkisiiseera,'' jedhan.
Marii gaggeeffamu hundarratti warri Masrii faayidaa gaafachuu malee kennuuf wayita dubbatan arginee hin beeknu jedhan Obbo Gadduun.
Hanga ammaatti Masriin Itoophiyaan osoo waliigaltee waloorra hin ga'in bishaan guutuu hin eegaltu ejjennoo jedhu qabattee jiraachuus ibsan Obbo Gadduun.
Amaaraa Maas Miidiyaa Ejensiin ibsa Obbo Gadduu wabeefftee akka gabaasetti ammoo Masiriin marii waliiglteerra gahuudhaaf taasifama jiru kana keessaa addaan kuttee kan batu yoo taate, kanaan booda Itoophiyaan haala kamiiniyyu mariif deebitee hin teessu jedheer.
Hidhi Haaromsaa diigamee ijaarama jedhamuun mirkanaa?
Hidha Haaromsaa Itoophiyaafi sodaa koronaavaayirasii
Sudaan Hidha Haaromsaarratti ejjennoo qabatte Mana Maree Nageenyaaf beeksifte
Dhimma ijaarsa Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaarratti ijaaramaa jiru ilaalchisee mariin biyyoota sadan-Itoophiyaa, Masiriifi Sudan gidduutti yeroo garaagaraatti gaggeeffamaa ture tokkollee bu'aa gaariidhaan hin xumuramne.
Erga US fi Baankiin Addunyaa jaarsummaadhaan gidduu seenaniimmoo biyyoota sadeen gidduutti keessattuu Itoophiyaafi Masrii gidduutti atakaaroofi walqoccoluun dhalateer.
Mariin dagatamee wayita walirraa fagaachaa deeman Sudaanis kan ejjennoodhaan Itoophiyaa bira dhaabbachaa turte, boodarra guutiinsa hidhichaarratti mormii agarsiisuu eegalte.
Biyyoonni sadeen kunneen tibba kana ammoo deebi'anii marii isaanii itti fufanii jiru
Koronaavaayiras: Hidha Haaromsaa Itoophiyaafi sodaa koronaavaayirasii
18 Caamsaa 2020
Hidhaa Laga Abbayyaa: Sudaan Hidha Haaromsaarratti ejjennoo qabatte Mana Maree Nageenyaaf beeksifte
4 Waxabajjii 2020
Itoophiyaa: 'Humni kamiyyu ijaarsa hidha haaromsaa dhaabsisuu hin danda'u'- Zooniin Waraana Lixaa
10 Caamsaa 2020
Waa'ee marii mootummaa federaalaafi TPLF abdatamaa jiru hanga ammaa maal beekna?
Daqiiqaa 38 dura
Qaamaa-qalbiin dhaggeeffachuun maali? Akkamiin walooma cimsa?
'Namoota baay'ee gabaabbatan yeroon argu bagan dheeradheen jedha'
Gabaan jijjiirraa tibbanaa taphattoota ciccimoo warra kam kilaba isa kamitti geessa?
Maatiin ‘booji’amtoota Ertiraa’ TV Tigraay irratti dhiyeeffamanii gaaffii kaasan
'Durbummaan waan kennamus, waan fudhatamus miti'
Yeroo dhuma kan haaromfame: 26 Ebla 2022
Qonnaan bulaan Harargee Lixaa sangoota lama birrii kuma 350tti gurguran maal himu?
Jaarsi mooraa ajjeechaa jumlaa Naazii eegaa ture umurii 101'tti hidhaan itti murame